Michael Keating oo shaaca ka qaaday in dib u dhac uu ku yimid doorashada Madaxweynaha Somaliya +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Michael Keating oo shaaca ka qaaday in dib u dhac uu ku yimid doorashada Madaxweynaha Somaliya +Cod
Michael Keating, ayaa sheegay inaysan doorashada Madaxweynaha Somaliya ku qabsoomi karin xilligii loo muddeeyay, oo ku beegan maalinta Arbacada ee soo socota (30-ka November).
Wakiilka Qaramada Midoobe u qaabilsan arrimaha Somaliya, ayaa tilmaamay in doorashada Madaxweynaha Somaliya qiyaas ahaan, ay qabsoomi karto 15-ka bisha soo socoto ee December.
Waxaa uu sheegay in hadda la doortay saddex meelood, laba meel oo ka mid ah Xildhibaanada Aqalka Hoose ee Baarlamaanka, iyadoo ay xiggi doonto in la diyaariyo jadwalka doorashooyinka Afhayeenada Labada Aqalka ee Baarlamaanka iyo midda Madaxweynaha.
Wakiilka oo la hadlay Barnaamijka Focus on Africa ee BBC, ayaa sheegay ka hor doorashooyinka labada afhayeen, in loo baahan yahay in la soo doorto tirada ugu badan ee Xildhibaanada Aqalka Hoose.
Sarkaal ka tirsan Guddiga Doorashooyinka, ayaa VOA u sheegay in doorashada Madaxweynaha Somaliya, ay dib uga dhici doonto 30-ka November, si loo xaliyo murunka ka taagan Xildhibaano la sheegay in musuq maasuq kaga adkaadeen musharaxiintii la tartameysay.
Si is dabajoog ah, ayaa Villa Somalia loogu eedeeyay in wax ka bedel ku samaysay Ergada loogu talla-galay inay soo doortaan Xildhibaanada Aqalka Hoose, isla-markaana ay dhaqaalo xad dhaaf ihi ku bixisay, sidii doorashada ugu soo bixi lahaayen xubno ka tirsan dowladda.
Waa markii afaraad oo la shaaciyo in dib u dhac uu ku yimid doorashada Madaxweynaha xigga.